Kia Motors မှ ကားများ Myanmar နိုင်ငံတွင် အောက်တိုဘာလဆန်းမှ စတင်ရောင်းချမည် | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar | Car News, Forums, Reviews, Discussions
Used Cars (2171)	Sedan (586)
Home » News » Kia Motors မှ ကားများ Myanmar နိုင်ငံတွင် အောက်တိုဘာလဆန်းမှ စတင်ရောင်းချမည်
8,158 total views, 11 today Print
41 Responses to “Kia Motors မှ ကားများ Myanmar နိုင်ငံတွင် အောက်တိုဘာလဆန်းမှ စတင်ရောင်းချမည်”
Zayar Lynn San on September 11, 2012 @ 4:59 am ကားသစ်တွေရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုဆိုပါတယ်။ ဘယ်လောက်တွေနဲ့ ရောင်းမလဲ? လက်ရှိ ဂျပန်ကားဈေးကွက်အပေါ် ဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးနိုင်မလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။.
Reply Soe Moe on September 11, 2012 @ 5:07 am SSS မှာတင်ထားတဲ့ယခင်ကားတွေကတော့ ဖြစ်သင့်တဲ့ဈေးထက် ၃၀%လောက်များတယ်၊ ပစ္စည်းမှန်ဖို့စိတ်ချရပေမဲ့ ဈေးမှန်ဖို့လည်းလိုတယ်နော်.
Reply Mk Pk Sithu on September 11, 2012 @ 4:29 pm မပူကြပါနဲ့ SSS လဲ အပြိုင်ပေါ်လာရင် တင်းမခံနိုင်ပါဘူး၊ Reply Nyunt Aung on September 23, 2012 @ 2:44 am Mk Pk Sithu , shall we believe SSS's technology is so advanced that they can produce the exact quality of Toyota Hi-ace in Myanmar (without proper factory).? LOL
Reply Lin Aung on October 11, 2012 @ 12:47 pm i agree with ko soe moe
Reply Wai Phyo Kyaw on September 11, 2012 @ 5:24 am SSS က ဈေးများတယ်လို့ကြားရတယ်။ ဟုတ်လားမသိဘူး။.
Reply Myanmar VIEW on September 11, 2012 @ 8:52 am ကြားတာတော့ အတွင်း လူ ကို တစ်ဈေး၊ အပြင်လူကို တစ်ဈေး တဲ့။
Reply Khin Mg Shwe on November 11, 2012 @ 12:26 pm who are their men?
Reply Rocher Cloudy on September 11, 2012 @ 5:27 am Kia rio ကတော့အနည်းဆုံး၁၀၀နီးပါးတော့ပေါက်မှာပါဒါတောင်အစိုးရကtaxမပါသေးဘူးနော်၁၅၀ကျော်လောက်ဆိုမဆိုးပါဘူး
Reply Zeyar Wynn Tun on September 11, 2012 @ 5:32 am ဈေးကတော့ ခုတော့မသိဘူး
Caldina GT-Four 280 လောက်ပေါက်တုန်းက သူတို့ဆီမှာ ZT ကို 340 တဲ့
Reply Myint Myat Thu on September 11, 2012 @ 7:58 am အရင်တုန်းက ZT က ဈေးပိုများတာလေ Reply Zeyar Wynn Tun on September 11, 2012 @ 11:12 am ရွှေငါး Fairlady တွေလည်း ၅၀ လောက်ကွာတယ်
Reply Nyunt Win on September 11, 2012 @ 5:34 am ကားသစ်တွေရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုဆိုပါတယ်။ပြည်ပကနေကုန်ချောတွေသွင်းလာပြီး လာရောင်းတာထက် ၊ ပြည်တွင်းကကုန်ကြမ်းနဲ့လူအင်အားကိုသုံးပြီး ပြည်ပကနည်းပညာနဲ့ ပြည်တွင်းမှာလာပြီးထုတ်လုပ်တာကို လိုလားပါတယ်။.
Reply Pyae Sone Aung on September 11, 2012 @ 6:20 am ကမ္ဘာမှာ လက်ရှိ ကားအသစ်ဈေးက $14000 ထက်ပေါတာ တရုတ်ကားနဲ့ TaTa ပဲရမှာပါ korea ကားလဲ $14000 ထက်မပေါပါဘူး လက်ရှိအခွန်က 1300 cc တောင် ၅၀သိန်းဆောင်တာဆိုတော့ အခုကအသစ်ဆိုတော့ ၅၀ ကျော်ဖို့ပဲရှိတယ် ပြီးတော့ ကိုယ်နိုင်ကမထုတ်နိုင်သေးတော့ သယ်ဆောင်ခလာအုံးမယ် ဆိုတော့သိန်း ၂၅၀ ထက်လျော့မယ်မထင်ပါ.
Reply Nyunt Aung on September 23, 2012 @ 2:48 am i think,Myanmar prefers old Japanese Cars more than Brand-new Korean Cars. Just look at Daewoo which finally ended up with closing down the showroom in 1997-98(they even sold with installment that time). Only hope Korea has is in "Light trucks",why they do not know.?
Reply Saw Naung on September 11, 2012 @ 7:50 am SSS နှင့် အကျိုးတူ ဆိုရင်တော့ ပြည်သူ တွေအတွက် အကျိုးမရှိနိုင်ပါ… ဈေးမပေါ နိုင်ပါ….
Reply Khaing Nyunt on September 11, 2012 @ 2:44 pm yes, completely agree
Reply Phyo Htike on September 14, 2012 @ 7:45 am ဘာမဆိုဖြတ်စားမယ်ဆိုတာကြီးပဲ
Reply KyAw AuNg on September 15, 2012 @ 5:27 pm ကိုစောနောင်ပြောတာ မှန်မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ
Reply Kyawkoko Kyaw on October 10, 2012 @ 1:38 pm super custom(living saloon Ex) တွေ…….ကားပွဲစားတန်းမှာ သိန်း၁၆၀လောက်ဆိုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေချိန်မှာ….SSSမှာ ကျွန်တော်မေးတာ ၂၁၀ တဲ့…….နံပါတ်ကလည်း ဇုန်ထုတ် ၈ည/—- ပါပဲ……………ဘယ်သူတွေပေးဝယ်ကြလည်းမသိ…
Reply Myint Lwin Yang on September 11, 2012 @ 9:20 am Sss ကတော့ဝယ်ပြီတမျိုး
Reply Yadana Win on September 11, 2012 @ 11:58 am အပေါ်မှာဖက်ရတဲ့commentတွေကတော့အဆင်မပြေဘူဖြစ်နေတယ်ဗျ
Reply Chan Myae Aung on September 11, 2012 @ 1:25 pm ကျနော် သီချင်းကို ထည့်ဘူးလား
Reply Ko Shay on September 12, 2012 @ 4:08 am ဈေးနှုန်းလေးသိရရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ် ၇ရင် တင်ပေးပါနော်.
Reply Htet Aung on September 13, 2012 @ 4:52 pm ကီးယားနှင့် ကုလား အကျိုးတူ ပေါင်းပြီး ၊ မြန်မာတွေ ကို ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြပါကုန်၊.
Reply Ko Allo on September 14, 2012 @ 3:13 pm sss ကရိုက်စား..အားလုံးကွန်မန့်ပေးတာ အမှန်ချည်းပဲ..အရစ်ကျဆိုလဲ ဈေးက ၂ဆလောက်များတာ.kia လာတာ ကြိုဆိုပေမယ့် sss ဆိုတော့ မယု့ဘူးဗျို့.
Reply Pyaw Aungmyin on September 15, 2012 @ 11:47 am အဓိက က ဘယ်ကားကုမ္ပဏီတွေပဲလာလာ နိုင်ငံတွင်းကကောက်တဲ့ CIF အခွန်နှုန်း မျှတဖို့ပဲ… အခွန်သက်သာရင် ပြည်သူတွေ ကားကောင်း ပိုစီးနိုင်တာပေါ့ဗျာ…. ဖြစ်နိုင်ရင် Model မြင့်လေ အခွန်သက်သာလေဖြစ်ရမှာ… ဒါမှ တပတ်နွမ်း ကားဟောင်းကို ကားကောင်းလုပ်ပြီးစီးနေရတဲ့ အဖြစ်က လွှတ်မြောက်မှာ…..ကုမ္ပဏီကတော့ တန်ရာ တန်ကြေးရောင်းမှာပဲ..အခွန်သာ မတန်တဆ မကောက်ရင် အမြင့်ကားတွေကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ စီးရမှာပါဗျာ….
Reply Nyanhtun Aung on September 15, 2012 @ 11:56 am ဟုတ်တယ်ဗျာ
Reply Linn Htet on September 15, 2012 @ 5:15 pm မြန်မာပြည်မှာက ကျွဲခေါင်းပါမှ ကားလို့ ထင်တာ..တကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်.. မြန်မာပြည်ကတော့ Toyota နဲ့ ပဲ အဆင်ပြေပါတယ်
Reply Linn Htet on September 15, 2012 @ 5:17 pm SSS ကတော့ပြောစရာမလိုအောင် ကို နာမည်ပျက်ပြီး နာမည်ကြီးနေပါလား
Reply KyAw AuNg on September 15, 2012 @ 5:24 pm ဘာဖြစ်လို့လဲ ဖ ရ
Reply Linn Htet on September 23, 2012 @ 12:15 pm ဈေးအရမ်းကြီးလို့ 
Reply Soe Htike on September 23, 2012 @ 3:23 am ဟုတ်ပါတယ် SSS က ဈေးကြီးပါတယ်၊ company တိုက်ရိုက်ရောင်းခွင့်ပေးရင် အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်.
Reply Kyi Thar Naing Aung on September 28, 2012 @ 4:00 am without government control is better, cause tax is too higher than the whole world it's very disappointed for the nation whom would like to buy new cars.
Reply Ye Naing Win on September 29, 2012 @ 5:21 pm ကားဘယ်လောက်ဝင်ဝင်အခြေခံလုတန်းစားကားမစီးနိုင်သေးဘူး
Reply Nay La on October 10, 2012 @ 10:00 am မြန်မာပြည်မှာက..ထားစရာမရှိတဲ့သူရယ်..စားစရာမရှိတဲ့သူရယ်.ဒီလူတန်းစားနှစ်မျိုးဘဲရှိတာ…လူလတ်တန်းစားကအတော်နည်းပါတယ်..ကားဈေးတွေဘယ်လောက်အထိကျကျ..အလကားရတောင်ဆီဘိုး..ပြင်ဆင်စရိတ်.စတာတွေကာမိအောင်.၀င်ငွေမရှိကြဘူး..အာဆီယံစံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းလူတစ်ထောင်မှာ(၁၃)ဦးတော့ကားစီးနှိုင်မှာမဟုတ်ဘူး..ကားဈေးတွေပိုပြီးကျလာရင်..ပိုက်ဆံရှိလူတန်းစား တစ်ဦးလျှင် ကား ( ၁၃ ) စီးနှုန်းဝယ်စီးနှိုင်မှာတော့ သေချာပါတယ်…
Reply Htun Nay Linn on October 10, 2012 @ 5:58 pm အခု picanto/ k2500 ဘယ်ဈေးပေါက်လဲဗျ.
Reply Than Htut Zaw on October 12, 2012 @ 5:05 am သွင်းတာ မသွင်းတာက အရေးမကြီးဘူး။ အဓိကက လူလတ်တန်းစားတွေ စီးနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်ဖို့ဘဲ လိုတယ်။
Reply Wana Kyaw Kyaw on October 12, 2012 @ 3:56 pm our burma must be think about for using the car or boat?
Reply Myat Lin on October 15, 2012 @ 4:58 pm sss net so yin dot , ma sin sar dot buu.
Reply Han Maw Kaung on October 25, 2012 @ 4:50 am kia ရေ လာရောင်းစမ်းပါ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖွင့်ပြီး ဈေးပေါပေါနဲ့ရောင်းစမ်းပါဗာ ဒီမှာရှိတဲ့ ကုမဏီတွေနဲ့မပေါင်းစမ်းပါနဲ့ sss ဆိုရင်တော့ သေပြီး ဈေးအကြီးဆုံးပဲပေါ့ နော် Kia လာမယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာသွားတယ် sss နဲ့ဆိုတော့အဆင်မပြေပါဘူးဗျာ။ အလကား အမြတ်ကြီးစားတွေ သူတို့ကားတွေမရောင်းရပါစေနဲ့ဗျာ ဒီမှာရေးထားတဲ့ comment တွေကို sss ကပိုင်ရှင်မြင်ပါစေဗျာ မေတာပို့ထားတယ်လေ။ car crony တွေလေ။.
by Hla Myo on June 14, 2013 - 1 Comment
ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများHILUX SURF SSR(G) (85 views)2007 (82 views)CHEVROLET MW (77 views)HONDA, INSIGHT HYBRID 2009, 138 သိန်း (အလျှော့အတင်းမရှိ) (70 views)Toyota Passo (69 views)Toyota Hilux Double Cab Pick Up 1020kg 4WD TD GX Diesel 2001 (68 views)Isuzu Rodeo DCAB PICKUP 3.0L 2004 (66 views)Isuzu Rodeo 3.0TD DENVER DOUBLE CAB 4X4 4dr 2003 (59 views)Bmw 318i also available for exchange (52 views)CALDINA (51 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar | Car News, Forums, Reviews, Discussions. All Rights Reserved.